ကျွန်ုပ်တို့၏ Planet ကိုကမ္ဘာမြေ, ကိုကူညီပါ Fix & ပိုမိုကောင်းမွန်စေမဗီဒီယိုများ Solutions ၏စာရင်း
သင်ဒီမှာပါ: Home / ကျွန်ုပ်တို့၏ Planet ကိုကမ္ဘာမြေ, ကိုကူညီပါ Fix & ပိုမိုကောင်းမွန်စေမဗီဒီယိုများ Solutions ၏စာရင်း
9 ပစ္စည်းများ 1 နောက်လိုက်0မဲ 1.15k အမြင်များ
အဆိုပါ Planet ကို Fixer Digest မဂ္ဂဇင်းဗီဒီယိုများ
Listly အားဖြင့် ရော်ဂျာ Pilon
အားလုံးဗီဒီယိုများအချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှဒီ Planet ကို Fixer Digest မဂ္ဂဇင်းကစုဆောင်း!
တစ်ဦးက Trifilm ပုံပြင်: အဆိုပါ Q-စည်
ဇူလိုင် 23, 2015 - youtube.com - 24
Q-စည်ကမ္ဘာ့ဆင်းရဲသားများအတွက်ရေသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအကျပ်အတည်းဖြေရှင်းဖို့ရေဖြည့်စွက်အားဖြင့်ဘီး Re-တီထွင်။ မိုင် Lippold / Doug လီယွန် / Todd Mueller, အလုပ်အမှုဆောင်ထုတ်လုပ်သူ-မာကု Dickison, ဒါဝိဒ်သည် Schommer အားဖြင့်ဂီတဖွဲ့စည်းမှုအားဖြင့်တည်းဖြတ် Guido Rong - မှ Ian ဂျေး, DPII - ညွှန်ကြားသည် / အာရုန်သည်ဖြောင့်, အကြီးတန်း Producer- Kim ကလောရင့်, DP ထုတ်ဝေသည်။
ဇူလိုင် 23, 2015 - vimeo.com - 20
ဤသည် Vimeo အပေါ် Ani Vallabhaneni, အရည်အသွေးမြင့်ဗီဒီယိုများနှင့်သူတို့ကိုမချစ်တဲ့သူကိုလူအဘို့အိမ်က "Sanergy ခြုံငုံသုံးသပ်ချက်" ဖြစ်ပါတယ်။
ဇီဝဗေဒထိန်းချုပ်ရေးကိုယ်စားလှယ်အဖြစ်ကျီမြည်နှင့် Kestrels ၏အသုံးပြုမှု
ဇူလိုင် 23, 2015 - youtube.com - 22
တဲလ်အဗစ်တက္ကသိုလ် - ဣသရေလအမျိုး၌ဇီဝထိန်းချုပ်မှုအေးဂျင့်အဖြစ်ကျီမြည်နှင့် Kestrels များအသုံးပြုမှု
nano Ganesh ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေး
ဇူလိုင် 23, 2015 - slideshare.net - 18
nano Ganesh Santosh Ostwal, CEO ဖြစ်သူ Rajashree Ostwal, DirectorOssian Agro Automation Pvt နေဖြင့်တည်ထောင်ခဲ့သော။ Ltd (2010) ယခင် ...
ဇူလိုင် 23, 2015 - youtube.com - 19
မကောင်းတဲ့ဖက်ဒရယ်မူဝါဒနှင့်ပြင်းထန်လာမုန်တိုင်းများဒီနိုင်ငံအနေနဲ့စိုက်ပျိုးရေးအင်အားကြီး လုပ်. သောအနာဂတ်ကာလ၌ကျန်းမာနှင့်ရေရှည်တည်တံ့အစားအစာစနစ်၏မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအခြေခံအုတ်မြစ်ကျန်ကြွင်းသောအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအနောက်ဘက်အလယ်ပိုင်းရှိအကြွယ်ဝသောမှောင်မိုက်မြေဆီလွှာများကွယ်ပျောက်ဆေးကြောနေကြသည်။
နောက်တွဲယာဉ် '' အဆိုပါကန္တာရရပ်သွားသူကားအဘယ်သူအဆိုပါက Man ''
ဇူလိုင် 23, 2015 - vimeo.com - 22
7 အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာရုပ်ရှင်ဆုဆုရှင်, တောရပ်သွားသူကားအဘယ်သူအဆိုပါက Man Yacouba Sawadogo, သဲကန္တာရ၏ဖြစ်စဉ်ကိုနောက်ကြောင်းပြန်တဲ့ technique ကိုရှေ့ဆောင်ခဲ့သူတစ်ဦးအာဖရိကတောင်သူလယ်သမားလယ်သမား၏ဇာတ်လမ်းပြောပြနေတဲ့တစ်နာရီအင်္ဂါရပ် doc ဖြစ်ပါတယ်။ မာကု Dodd, 1080 ရုပ်ရှင်အားဖြင့်ဖန်ဆင်းတော်မူ၏။
သေမင်း၏မျိုးစေ့များကို - အပြည့်အဝ Movie,
ဇူလိုင် 23, 2015 - youtube.com - 17
Facebook တွင်သေမင်း၏အမြိုးအနှယျ LIKE http://www.facebook.com/seedsofdeath Monsanto ဆန့်ကျင်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာမတ်လပြင်ဆင်မှုအတွက်, သငျသညျသခွေငျးတရားအခမဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆုရမှတ်တမ်းရုပ်ရှင်မျိုးစေ့ကိုစောင့်ကြည့်ဖို့ဖိတ်ခေါ်နေကြသည်။ http://www.march-against-monsanto.com/ Big စိုက်ပျိုးရေးများ၏ခေါင်းဆောင်များ - Monsanto, DuPont, Syngenta - ကမ္ဘာ့လူဦးရေမျိုးရိုးဗီဇပြုပြင်ထားသောကောက်ပဲသီးနှံနှင့်စက်မှုလယ်ယာစိုက်ပျိုးရေး၏လေးနက်သောကျန်းမာရေးနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အန္တရာယ်များအကြောင်းကိုမသိဘဲကျန်ကြွင်းသောစိတ်ပိုင်းဖြတ်နေကြသည်။
ဇူလိုင် 23, 2015 - youtube.com - 23
ဗီဒီယိုကိုတင်ဆက် - တစ်ဦးရော်ဘာစွန့်ပစ်ထဲမှာတစ်ဦးကရွှေမိုင်း
Farouk Tedjar & Jean-Claude Foudraz - ဘက်ထရီပြန်သုံးဘို့နည်းလမ်း
ဇူလိုင် 23, 2015 - youtube.com - 21
lithium-ion အခြေပြုအားပြန်သွင်းနိုင်ဘက်ထရီဘီလျံကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆဲလ်ဖုန်း, laptop များနှင့် MP3 ကစားသမားပါဝါမှနှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းထုတ်လုပ်လျက်ရှိသည်။ သူတို့ကိုပယ်စွန့်ပစ်၏ကြီးမားသောပမာဏအထိထည့်သွင်းနိုင်ပါတယ်။